Smart-7 Mobile Service& Training Centre မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်သင်တန်း အပတ်စဉ် (2) စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါပီ. - Software Guide
Home / Uncategories / Smart-7 Mobile Service& Training Centre မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်သင်တန်း အပတ်စဉ် (2) စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါပီ.
Smart-7 Mobile Service& Training Centre မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်သင်တန်း အပတ်စဉ် (2) စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါပီ. Reviewed by Ko Lin on 11:25:00 PM Rating: 5
Smart-7 Mobile Service& Training Centre မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်သင်တန်း အပတ်စဉ် (2) စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါပီ.
Ko Lin 11:25:00 PM
ကဲ ကျနော်တို့ Smart-7 Mobile Service & Training Centre ရဲ့ တန်းခွဲ အပတ်စဉ် (2) ကို (9.2.2016)ရက်နေ့ကနေ စပြီး တက်ရောက်နိုင်ပါပီဗျာ...
ကွန်ပျူတာ အခြေခံမရှိသူများကတော့9ရက်နေ့ကို အရောက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်..ကွန်ပျူတာ အခြေခံ ရှိပီးတဲ့သူတွေကတော့ 14 ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပီး လာလည်းရပါတယ်..
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းချင်သူများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပီ.... စာရင်းပိတ်ရက်ကတော့(9)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပီး စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။